Ọzụzụ ITIL | Iwu ITIL ITIL Agụmakwụkwọ - ITS Tech School
ITIL nchịkwa akwụkwọ
Onye nkụzi ọkachamara ITIL
Nchịkwa Axelos Training Agụmakwụkwọ
Ụgwọ Nyocha Akwadoro gụnyere
Ezinụlọ & Nri (Na 3 / 4 / 5 Star Hotels)
Ọdụ Ụgbọ Mmiri na Ụgbọ Mmiri
Ụgbọ njem njem kwa ụbọchị
100% Onu ogugu
Na-emepe ma na-amụbawanye Ọmụma ITIL gị
Rụpụta nkà na ịkwadebe maka ule akwụkwọ nyocha ITIL na usoro nhazi ITIL boot boot site Nchọpụta Nchọpụta ọhụrụ. A na-eme ka ebe obibi anyị akpụkpọ ụkwụ na-emikpu gị n'ime ihe ndị ịchọrọ ịchọta, n'ihi ya, i nwere ike ịmepụta ma gbasaa nkà gị n'ụzọ gara nke ọma. Gụọ na ọkachamara anyị ọkachamara ITIL ndị nkụzi iji mee ka ị na ọsọ ngwa ngwa.
N'ime ahịa ndị a, ndị ọrụ dị mkpa iji nweta usoro kachasị mma maka nhazi usoro, iji hụ na ha na-aga n'ihu asọmpi ma na-emepụta uru. Ụlọ Ọrụ Akụrụngwa Ịnweta Ihe ọmụma (ITIL®) bụ isi ihe omume kachasị mma maka nlekọta ọrụ IT nke na-enye aka dozie ọrụ IT na mkpa ego. Ọ BỤ na-ewetara gị usoro na ITIL® Foundation nke na-ewebata isi ihe, echiche na okwu e ji mee ihe na ITIL® Service Lifecycle. Site na mmegharị omume dị iche iche, ịkwa emo ule na ihe nkwekọrịta zuru ezu, ị ga-ejikere nke ọma iji nwalee akwụkwọ ITIL® Foundation ma mejuputa ụkpụrụ iji merie nsogbu ndị dị n'ụwa. Rụba nke ahụ ama Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ bụ Ụlọ Ọrụ Ọzụzụ (ATO) nke Ndị PEOPLECERT na Onye Mmekọrịta Akara nke Axelos maka ITIL® Trainings.
Nchịkọta ITIL® Foundation na-azụ ndị na-aga ime ka ha nwee nkwurịta okwu n'ụzọ dị irè na ụlọ ọrụ ha yana ndị ahịa ma belata oge nzaghachi. Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ na-enye klas n'ịntanetị n'isiokwu nke ngalaba ha zụrụ azụ. A na-ahazi usoro mmemme E-a ma mee ka ị gaa n'ihu ndị asọmpi gị.
Kedu ihe ị ga-amụta?
Mgbe ha mechara nyochaa ihe a na nyocha nke ọma, ndị mmeri ga-aghọ ndị nwere nkà na:
Jiri nlezianya ghọta echiche, okwu na nkọwa nke ITIL®
Mata ITIL®omume kachasị mma na otu e si eme ha iji bido usoro iji mee ka ọ dịkwuo mma
Ghọta isi ihe nke Service Management na Service Lifecycle iji meziwanye mkpebi achụmnta ego ma mee ka atụle ndị ahịa
Nweta nkwadebe zuru oke maka ITIL®Asambodo ntọala
Ndepụta akwukwo nke akwukwo ITIL
1. Foundation ITIL
2. ITIL Intermediate SS (Atụmatụ Ọrụ)
3. ITIL Intermediate SD (Ọrụ Kere)
5. ITIL Intermediate SO (Ọrụ Ọrụ)
6. ITIL Intermediate CSI (Mgbasa Ozi Ịga n'ihu)
7. ITIL Intermediate PPO (Atụmatụ, Nchedo na njikarịcha)
8. ITIL Intermediate OSA (Ọrụ Nkwado na Analysis)
9. ITIL Intermediate RCV (Hapụ, Control na nkwado)
10. ITIL Intermediate SOA (Ọrụ Enyemaka na Nkwekọrịta)
11. ITIL Na-achịkwa Ndụ Ndụ
12. OTI OZI
Esi nweta akwụkwọ na ITIL
Nzube nke Akwụkwọ nke Foundation ITIL na Nlekọta Ọrụ Ntanị bụ igosi na onye nyocha ahụ enwetawo ihe ọmụma banyere okwu ITIL, usoro na echiche ndị bụ isi ma ghọtara isi ụkpụrụ omume ITIL maka nlekọta ọrụ.
The ITIL v3 márá asambodo dị maka onye ọ bụla nke gafereIhe nyocha nke Foundation ITIL. Ọ nwere usoro dị iche iche na nke ọ bụla na-eme ka iche iche na nlekọta Nhazi IT. Ị nwere ike iwepụta dịka ole na ole ma ọ bụ ọtụtụ Intermediate.
Ọtụtụ ndị na-eweta IT na-ahụ ugbu a na ha na-ejikwa ndị ọrụ nchịkwa karịa ndị ọrụ nke aka ha. N'ezie, a na-arụ ụka banyere ọganihu na-arịwanye elu nke njikọta ọrụ na-abịakwute na ndị ọkachamara na-ahụ maka ọdịnihu ga-achọ inwe ọkachamara
Jikwaa Ahịa Business maka Ọrụ gị
Wedata mmeghasị ọrụ
Nweta uru maka ego n'aka onye na-ahụ maka ọrụ gị
Gbaa mbọ hụ na ndị ahịa gị nwere ike iji ọrụ mgbe na ebe ọ dị mkpa
Nkwado ahia na ahia nke ọrụ gị
Na 1980's, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ịzụ Ihe Ịzụ Ihe ọmụma (ITIL) mepụtara site na Kọntaktị Kọntaktị na Kọntaktị Ngwá Ọrụ (CCTA), ọ bụ oge UK nọ na-alụso Nsogbu na Ngalaba IT. Na mbido mbụ e nwere ọtụtụ akwụkwọ nke na-ekpuchi omume ndị dị n'ime ITSM.
Ndagharị 1 ITIL na-agbanye ihe karịrị 30 mpịakọta na 1986-1996, nke ahụ bụ oge nke ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ IT na-eji nke a. N'ihi ngwa ngwa nke ọma, ọdịdị a gbanwere na ntụgharị ọzọ ITIL 2 2001, na 9. Akwukwo a nwere ike inweta karia ma jiri ya tụnyere nke gara aga. Ụdị ITIL ọhụrụ a bụ nchikọta nke 2 Management Sets. N'ime ha 2 Service Management Sets na-ejikarị eme ihe na ngalaba IT. Ebube 2006 Glossary nke ITIL abiawo ka o lee na XNUMX.
E jikọtara Ụlọ Ọrụ Kọmputa na Ngwakọta Kọntaktị Kọntaktị na Office nke Gọọmenti Ọchịchị (OGC) n'otu afọ ahụ mgbe e bidoro ITIL Version 2. Na 2007, nzukọ a malitere nsụgharị nke ITIL ka a kpọọ ITIL Version 3 (V3) ma ọ bụ ITIL 2007 Edition ma ọ bụ ITIL Refresh Project.
Ugbu a, V3 si na mpịakọta 9 gaa na Mpịakọta 5 ma kwupụta echiche nke Service Web. A kpọrọ aha ndị a dịka: -
Mgbasa Ozi (SS)
Ntugharị Ọrụ (SD)
Mgbasa Ozi (ST)
Ọrụ Ọrụ (SO)
Nkwalite Ịrụ Ọrụ Na-aga n'ihu (CSI)
Ekem ke 2009, ẹkesio nsio nsio nsio nsio nsio ke n̄wed ke Ufọkn̄wed Obio Ubọn̄. E bipụtara mbipụta nke 2007 Edition na 2011. Nke a bụ nsụgharị ikpeazụ nke edegharịrị.
Kedu Ahịa Ụlọ Ahịa Ahịa?
Gweta Sharma, Ọrụ Ịrụ Ọrụ Intermediate ITIL
Emeela m ntọala m na ụlọ ọrụ ITIL site na ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ ya na ọnwa ikpeazụ ya. Achọpụtara m na onye ahịa ahịa Mr Sandeep na onye na-enye ọzụzụ na-enyere aka ịghọta usoro zuru oke na ọbụlagodi na ha na-enye aka inye ọdịnihu ọdịnihu. Enwere m obi ekele ma ha abụọ ma chọọ otu ihe ahụ n'oge ọmụmụ m ndị ọzọ na ITSTECHSCHOOL
Tarun, ITIL- Ọrụ Nhazi Ime Obodo
Ya nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị mma na ihe niile dị mkpa Infra. Kpochapu ntọala ITIL na nbido mbụ na ezigbo akara. Kwadoro ihe niile ị ga - esonyere na nke a maka asambodo ha.
Ọ bụ oge ọmụmụ ihe. Echere m na anyị nwere oge yiri nke a maka oge ndụ ndị ọzọ, ga-amasị ịga ma mụta ihe.
Ojasv Jain, Ọrụ Ịrụ Ọrụ Intermediate ITIL
Ọ bụ ọzụzụ magburu onwe ya na onye nkuzi dị otú ahụ dị ebube na ebe obibi mmụta. Ọ dị mma ịmara otú otu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ na usoro njikọ. Ọzọ onye nkuzi maara nke ọma na ọ kọwara ihe niile n'ụzọ ndidi na ihe atụ ndị bara uru mere ka m ghọta nke ọ bụla na ihe niile dị mfe. Enweghị m atụ anya na ọ ga-abụ ụdị ahụmahụ magburu onwe ya mana m na-eme atụmatụ imezigharị akwụkwọ m nke si n'ebe a. Ekele na ihe kachasị mma maka mmadụ niile.
Kamal Kant Sharma, Ọrụ Ịrụ Ọrụ Intermediate ITIL
Ndị ọrụ na-akwado Gr8. Onye na-enye ọzụzụ nwere ezigbo ahụmahụ na ITSM. Kasị mma nri. enwe ezigbo ahụmahụ n'oge ọzụzụ
Rakesh Ass, ITIL Na-achịkwa Ndụ Ndụ
Ihe na23 Mar 2018
Ihe na04 Jan 2018
ITIL: Ọdịiche dị n'etiti Management na Nsogbu Nsogbu
Ihe na26 Dec 2017
Otú ITIL si enyere aka na ọrụ
Ihe na04 Dec 2017
Ihe na14 Nov 2017
Ihe na01 Nov 2017
Ihe na11 Oct 2017
Ihe na23 Jun 2017
Ajuju Ajuju na Azịza maka akwukwo nyocha ITIL 2017
Ihe na22 Jun 2017
Ihe na07 Jun 2017
Kedu ihe nyocha ITIL nke a ga - ewe na ihe ndị chọrọ ntinye?
Atumatu akwukwo ITIL® nyere usoro nke asambodo nke na eleba anya na ihe di iche iche nke ITIL Framework.
Foundation ITIL - Ọ dịghị mkpa ọ bụla dị ka ndị dị otú ahụ & onye ọ bụla chọrọ ịchụso ọrụ na ya ụlọ ọrụ nwere ike ịga maka njikọ (Foundation) certificate.ITIL Foundation certification bụ ntinye akwụkwọ ntinye na ITIL njem
ITIL n'etiti - Ka ị gaa maka akwụkwọ ikikere ọ bụla ITIL (usoro ndụ ndụ ma ọ bụ ike) ịkwesịrị inwe ntọala ntọala.
Ahụmahụ ITIL Njem - Iji ghọọ ọkachamara ITIL, ịkwesịrị ịga site na ụdị ITIL Training Modules & nwere ike ikpochapụ akwụkwọ ndị metụtara ya, na ime nke a, ị ga-enweta ụfọdụ Ebe E Si Nweta. Iji nweta nzere ọkachamara ITIL ị chọrọ ngụkọta nke 23 Ebe E Si Nweta.
Kedu ụzọ mmepụta maka ọzụzụ ọzụzụ ndị a kwadoro ITIL?
Na Nchọpụta Ntanetị Ọhụrụ ọhụrụ anyị na-enye ọzụzụ ITIL na ụdị 3 dị iche iche -
1.Ọzụzụ klas na India (Gụnyere - Ọzụzụ + Ụlọ + Nri + Ụgbọ mmiri na-ebuli elu & Gbasaa + Daily Transportation + Facility Other).
2.Onye Nkụzi Na-ahụ Maka Ntanetị Ọzụzụ ị nwere ike iji na nkasi obi nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ n'ụlọ gị.
3.Ụdị Ọzụzụ Na-aga - Ebee ka anyị na-eziga onye nlekọta anyị na ọnọdụ gị iji nye ọzụzụ na ụlọ gị, ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndị tinyere (karịa 5 pax) maka ọzụzụ.
Ole ndị bụ ndị nkụzi maka klas na online (OILT) ọzụzụ?
Nchọpụta Ntanetị Ọhụrụ (ITS) bụ Onye Mmekọrịta Ọzụzụ nke Axelos ma nye ihe kachasị mma na mmemme ọzụzụ ọzụzụ nke ụlọ ọrụ nke ndị ọkachamara nwere ahụmahụ dị na Ụlọ Ọrụ Ọzụzụ Nleta.
Kedu ọrụ m nwere ike nweta mgbe ị ghọchara akwụkwọ ITIL?
Ọ bụrụ na ị bụ ntinye ma ọ bụ nwere afọ ole na ole nke ahụmahụ IT, ị nwere ike ịtụ anya na a ga-akwụ gị ụgwọ dị ka onye nhazi usoro. Onye nhazi usoro na-eme ka o doo anya na a na-eme ihe omume nhazi na usoro. Onye nhazi na-akpata ọdachi, ịgbanwe onye nhazi na onye nhazi nhazi bụ ụfọdụ ọrụ nhazi nke dị na ITIL® na-elekọta ọrụ nlekọta IT.
N'okwu nchịkwa n'etiti, na nke kachasị dịka afọ asatọ, ahụ nwere ike ịjụ gị ka ijikwa usoro ejedebe na njedebe. Ị ga-enwe ndị nhazi ịkọọrọ gị, ị ga-aza ajụjụ maka ịme ka ọrụ ndị dị na njikwa ọrụ kwadoro usoro ahụ. Onye nchịkwa nsogbu, onye nkwụsị ọrụ na onye na-elekọta ọrụ nchịkwa ọrụ bụ ụfọdụ ọrụ ọrụ njikwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye na ọrụ ITIL®, ị ga-enyerịrị ụzọ dị iche. Ị ga-abụ onye na-achọpụta na ekweghị ekwekọrịta na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na-eche banyere njikarịcha. Ka anyị were akụkọ na-abụghị nke IT dịka ọmụmaatụ. N'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ, onye nwe ụlọ na-anọchi gị. Onye nlekọta na-ewe iwu. Onye na-agba ọsọ nri na-ebufe nri, na busser na-ekpuchi tebụl. Enweghị ọrụ ọ bụla a ga-eme maka iche. Mgbe ị gara ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ị na-edebe usoro a? Ị na-ahụ mgbanwe ma na-eche banyere ọrụ ndị dị, gịnị ka ọ bụghị? Ọ bụrụ na ị na-ahụ ma na-eche echiche n'ụzọ a, ị nwere ike ịmepụta nke ọma na usoro ọkachamara / usoro onye mmepụta ọrụ. Ndị nlekọta nhazi nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ na ịhụnanya igwu aka ha n'ime ihe niile, n'ime ITIL® na. Ọ bụ ọrụ a na-akwanyere ùgwù na ụlọ ọrụ ahụ, ma ị ga-ahụ usoro nhazi akwụkwọ na ịmepụta sụgharịa.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ; ị nwere ike ịbụ onye nkuzi ITIL®. Site na ITIL® na ndị ọrụ, nnukwu ndị ọrụ na-aga ụzọ ITIL®. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye na-enye ọzụzụ, nyochaa usoro ITIL® zuru ezu. Onye na-enye ọzụzụ ITIL® ga-adị mkpa ka ịdebe okpu nke agụmakwụkwọ iji zụlite ụmụ akwụkwọ na nkà nke ITIL®.
Kedu ihe ọrụ ọzụzụ anyị gụnyere?
Ọrụ Ọzụzụ Ụlọ Akwụkwọ gụnyere -
• Ọzụzụ Ọzụzụ na Ihe Ọzụzụ Ndị Ọchịchị
• Ụgwọ nyocha akwụkwọ nyocha
• Ezinụlọ & Nri (Na 3 Star Hotel)
• Ọdụ ụgbọ elu na - ebuli elu
• Ụlọ ọrụ njem njem kwa ụbọchị
• Ụlọ ọrụ Wi-Fi n'efu na ụlọ ọrụ ọzụzụ & Ụlọ nkwari akụ
• 100% Na-agafe nkwa
Ụgwọ Ọzụzụ Ịntanetị gụnyere -
Kedu ka m ga-esi ede akwụkwọ m?
N'IKE ya, ụgwọ ọrụ ọzụzụ gị gụnyere ụgwọ nyocha akwụkwọ nyocha, a ga-ede akwụkwọ nyocha ya kpọmkwem site na ITS
Aka m akwụkwọ ITIL ọ ga-agwụ?
Akwụkwọ ikikere ITIL anaghị akwụsị. Otú ọ dị, e nwere nsụgharị dị iche iche nke ITIL v3 2011 bụ nke kachasị ọhụrụ. Ozugbo e mepụtara usoro ọhụrụ nke usoro a, ị ga-achọ ka a mara gị ọzọ.
Asambodo dị aṅaa ka m ga-enweta mgbe emechara ọzụzụ ahụ?
Mgbe ịmechara ọzụzụ ahụ ma mechaa ule ahụ, a ga-enye gị akwụkwọ ikike sitere na Axelos.
Kedu ihe ga-eme ma ọ bụrụ na m adaghị ule?
Na Ngwọta Ntanetị Ọhụrụ, Anyị na-enye 100% ịgafe nkwenye na ọ bụrụ na ụfọdụ1 adaghị nyocha ma ọ bụ na nyochaghị 2, anyị na-enye 2nd ogbugba (Reattempt) n'efu.
Ozi gị *